ကမ္ဘာဒီးယားနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းထိ ရှိလာ - Xinhua News Agency
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့၌ ဩဂုတ် ၂၆ ရက်တွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်တစ်ဦးအား Sinovac COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဖနွမ်းပင် ၊ စက်တင်ဘာ ၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် နိုင်ငံလူဦးရေ ၁၆ သန်း၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် အရည်အချင်းပြည့်မီသူ ၁၁ ဒသမ ၂ သန်းနီးပါး အား COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် ထိုးနှံထားကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက စက်တင်ဘာ ၅ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့၌ ဩဂုတ် ၂၆ ရက်တွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတစ်ဦးက Sinovac COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံရန် ပြင်ဆင်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့၌ ဩဂုတ် ၁ ရက်တွင် ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်တစ်ဦးက Sinovac COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှု ခံယူနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားသူ ၁၁ ဒသမ ၂ သန်းနီးပါးအနက် ၈ ဒသမ ၈၇ သန်း သို့မဟုတ် ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကာကွယ်ဆေး နှစ်ကြိမ် ထိုးနှံထားပြီး သုံးကြိမ်မြောက် ဆေးထပ်မံထိုးနှံသူ ၆၆၀,၂၉၂ ဦး ရှိကြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၏ အတွင်းဝန် Or Vandine က ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်အထိ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၁၀ သန်း၏ ၉၅ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်အရွယ် ဆယ်ကျော်သက် ၂ သန်းခန့်၏ ၈၄ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းအား အနည်းဆုံး ကာကွယ်ဆေး တစ်ကြိမ် ထိုးနှံထားပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံရေး လှုပ်ရှားမှုအား ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စတင်ခဲ့ပြီး လူအုပ်စုအကြား ကိုယ်ခံအားစနစ် တည်ဆောက်ရန် ယခုနှစ်ကုန်တွင် ခန့်မှန်းခြေ လူ ၁၂ သန်း သို့မဟုတ် စုစုပေါင်း လူဦးရေ၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းအား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ဆေးထိုးသည့် အစီအစဉ်တွင် အသုံးပြု အများဆုံးကာကွယ်ဆေးသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ Sinovac နှင့် Sinopharm တို့ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံသံရုံး၏ ပြောကြားချက်အရ ယခုထိ တရုတ်နိုင်ငံက ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ ၂၆ ဒသမ ၈ သန်းစာအား ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသို့ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်း ၊ ယင်းတို့အနက် ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ ၄ ဒသမ ၃ သန်းသည် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အလှူဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း(WHO) အနောက်ပစိဖိတ်ဒေသတွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ဦးရေအကြား COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှု ရာခိုင်နှုန်း အမြင့်ဆုံး နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂက ပြီးခဲ့သောလတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် စက်တင်ဘာ ၅ ရက်တွင် ပြည်ပမှ ဝင်ရောက်သူ ၁၄၆ ဦးအပါအဝင် COVID-19 ရောဂါပိုးရှိသော လူနာသစ် ၄၆၁ ဦးအား စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး နိုင်ငံတွင် စုစုပေါင်း လူနာ ၉၅,၃၀၀ ဦးထိ မြင့်တက်လာကြောင်း နှင့် လူနာ ၇ ဦး ထပ်မံသေဆုံးပြီး သေဆုံးသူပေါင်း ၁,၉၅၇ ဦးထိ ရှိလာခဲ့ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။
ပြန်လည်သက်သာလာသူ ၄၁၁ ဦး ရှိသဖြင့် ပြန်လည်သက်သာလာသူ စုစုပေါင်း ၉၀,၆၈၄ ဦးထိ ရှိလာခဲ့ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထည့်သွင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ (Xinhua)
Cambodia’s national COVID-19 vaccination rate reaches 70 pct
PHNOM PENH, Sept.6(Xinhua) — Cambodia has administered at least one shot ofaCOVID-19 vaccine to almost 11.2 million eligible people, or 70 percent of the kingdom’s 16-million population,aspokesperson for the Ministry of Health (MoH) said on Sunday.
The Southeast Asian nation beganaCOVID-19 vaccination drive in February, targeting to inoculate approximately 12 million people, or 75 percent of the total population, by the end of this year in order to build herd immunity.
Most of the vaccines used in the country’s immunization program are China’s Sinovac and Sinopharm. According to the Chinese Embassy in Cambodia, so far, China has provided 26.8 million vaccine doses to Cambodia, of which 4.3 million doses are humanitarian donations.
The United Nations in Cambodia said last month that Cambodia has one of the highest percentages of COVID-19 vaccination among its adult population in the World Health Organization (WHO) Western Pacific Region.
Meanwhile, the country reported 461 new COVID-19 cases, including 146 imported on Sunday, pushing the national total caseload to 95,300, the MoH said, adding that seven more fatalities were confirmed, bringing the death toll to 1,957.
Additional 411 patients recovered, taking the total number of recoveries to 90,684, the MoH added.■
Photo 1 – A medical worker inoculates an adolescent withadose of Sinovac COVID-19 vaccine in Phnom Penh, Cambodia, Aug. 26, 2021. (Photo by Phearum/Xinhua)
Photo2– A medical worker preparesadose of Sinovac COVID-19 vaccine in Phnom Penh, Cambodia, Aug. 26, 2021.(Photo by Phearum/Xinhua)
Photo3– An adolescent receives his first dose of Sinovac COVID-19 vaccine in Phnom Penh, Cambodia, Aug. 1, 2021. (Photo by Ly Lay/Xinhua)
ဖိလစ်ပိုင် စစ်တပ်က တောင်ပိုင်းကျွန်းများတွင် အကြမ်းဖက်သမားများအား နှိမ်နင်းရန် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄,၅၀၀ ထပ်မံတပ်ဖြန့်မည်